वामदेव भित्रिए, खतिवडा बाहिरिए
टीपी भुसाल विजय दमासे
काठमाडौं । लामो समयदेखिको रस्साकस्सीपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभाको रिक्त एक सीटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा दोहो¥याउन चाहनुभएको थियो । तर, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब पर्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार दिउँसो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी
भदौ २० गतेपछि अर्थमन्त्रीकै रूपमा निरन्तरता पाउन खतिवडालाई राष्ट्रिय सभाको सांसदमा पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो । तर, वामदेवलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयले खतिवडा पुनः अर्थमन्त्री बन्ने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।
यद्यपि राष्ट्रिय सभामा सरकारबाट मनोनीत अन्य दुई सदस्यमध्ये एकलाई राजीनामा गराई खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभामा ल्याउने बाटो भने खुलै छ । बिहीवारको सचिवालय बैठकमा यसबारेमा कुनै छलफल नभएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेकपा सचिवालयले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन गत फागुन १४ मै मन्त्रिपरिषद्मार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेकपाको विवाद सतहमा आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने खतिवडाको कार्यकाल गत फागुन २० मै सकिएको थियो । उनी सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । पछिल्लोपटक खतिवडालाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि कायम हुने गोला प्रथामा दुईवर्षे कार्यकालको चिट्ठा परेको थियो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य पद नरहने भएपछि गत फागुन २० मा प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राजीनामा बुझाएका खतिवडा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
फागुन २१ मा अर्थमन्त्री पदको दोस्रोपटक शपथ ग्रहण गरेका खतिवडालाई पछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारको प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका खतिवडाको पछिल्लो ६ महीने कार्यकाल २० भदौमा सकिँदै छ ।
खतिवडा अर्थमन्त्रीमा फेल कि पास ?
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदमा लैजाने नेकपाको निर्णयसँगै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा झन्डै ३० महीने कार्यकालपछि बिदा हुँदै छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा मुख्यगरी वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन, ऐन–कानून निर्माण, लगानी सम्मेलनलाई सफल पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । कोरोना महामारीको समयमा सरकारमाथि स्रोतको चाप पर्दा दातृ निकायको विश्वास जितेर मुलुकमा वैदेशिक सहायता भिœयाउन पनि उनले सक्दो प्रयास गरे । यद्यपि अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू भने खतिवडाको कार्यकाल आंशिक रूपमा मात्र सफल रहेको बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री डा. विश्वभर प्याकुरेल राजनीतिक क्षेत्र बाहिरबाट आएकाले अर्थमन्त्री खतिवडाले आप्mनो विज्ञता सही रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको ठान्छन् । ‘हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रणाली नै कामभन्दा पनि राजनीतिमा बढी केन्द्रित छ । राजनीतिक गोलचक्करबाट उम्किन मन्त्री खतिवडालाई कठिन भयो,’ प्याकुरेलले भने । मन्त्री खतिवडाले स्पष्ट अडान लिन नसक्दा सफल हुन नसकेको प्याकुरेलको बुझाइ छ ।
‘कतिपय विषयमा उहाँ (अर्थमन्त्री) लाई पार्टीबाट दबाब आए पनि सही कुरा बुझाएर अडान लिन सक्नुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने । खुद्रे आयोजनामा पैसा छर्ने प्रवृत्ति रोक्न नसक्नु र कार्य सञ्चालन प्रणाली सुधारमा खतिवडा कमजोर देखिएको प्याकुरेलको धारणा छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार सरकार सञ्चालनमा ओलीसँगै अर्थमन्त्री खतिवडासमेत सफल भएनन् । खर्च प्रणालीमा सुधार नआएको, महामारीविरुद्ध ठोस कार्ययोजना ल्याउन नसकेको, राष्ट्र ऋण कम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानुको जिम्मेवारी सरकार र मन्त्रीहरूले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खर्चमा अर्थमन्त्री खतिवडाले केही सुधारको प्रयत्न गरे पनि त्यो न्यून रहेको महत बताउँछन् । ‘सय ठाउँबाट बजेट चुहावट भइरहेको छ, त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनु भएन । एक–दुई ठाउँको मात्र रोक्नेतिर ध्यान दिनुभयो,’ महतले भने ।
उनका अनुसार महामारीका बेला सरकारले उद्योगप्रतिष्ठान चलायमान बनाउन विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने र विकास खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा यसको जिम्मेवारीबाट अर्थमन्त्री खतिवडा पन्छिन मिल्दैन ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य पुस्तक, विद्युतीय गाडीमा करजस्ता महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदा अर्थमन्त्रीलाई सफलता मिल्न नसकेको बताउँछन् । आफ्नो विज्ञता देखाउन नसक्नु, अरूको कुरै सुन्न नचाहनु र मितव्ययिता कायम गर्ने भने पनि व्यवहारमा उतार्न नसक्नु मन्त्री खतिवडाको कमजोरी रहेको आचार्यको ठम्याइ छ ।